လှပတဲ့မင်းသမီးချော Chompoo Araya ဟာ Hi-So Nott Visarut နဲ့ ၂၀၁၅ မေလ (၁၀) ရက်နေ့တုန်းကပဲ လက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အမြွှာလေးနှစ်ယောက်တောင် မွေးဖွားပြီးပါပြီ။ Nong Sai Fah နဲ့ Nong Payu ဆိုတဲ့ သားအမြွှာလေးနှစ်‌ယောက်ကတော့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတာကို Chompoo ရဲ့ IG မှာ မြင်နိုင်ပါတယ်။
အစောကြီးကတည်းက သားသမီးများများလိုချင်တဲ့အကြောင်းပြောဖူးပြီး တတိယမြောက်ရင်သွေးလေးက သမီးလေးဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်,လို့ သတင်းထောက်တွေကို ပြောပြဖူးပါတယ်။
September 24 ရက်နေ့မှာတော့ Chompoo Araya ဟာ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကို “ငါ့အသွေးအသားထဲကနေ ဖြစ်တည်လာမယ့် နောက်ထပ်နှလုံးသားတစ်စုံရှိနေပြီ” လို့ Caption ရေးသားက ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်သူ Hwanjeab က “မျက်ရည်တွေတောင် ကျနေပြီ။
Congratulations ပါ Araya” လို့ comment ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ Kimmy Kimberley က “OMG, congratulations”, Lydia Sarunrat က “Woo Hoo! နောက်ဆုံးတော့… Yay! မင်းနဲ့မင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးအတွက် Congratulations ပါ” စသဖြင့် ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုနေခဲ့ကြပါတယ်။
မြောက်မြားစွာသောနာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Sammy Cowell, Patricia Good, Mew Nittha, Thanaerng Kanyawee, Aimee Morakot, Gubgib Sumonthip စသူတွေဟာ comment တွေကနေတဆင့် Chompoo Araya ကို ဂုဏ်ပြုပေးနေခဲ့ကြပြီး နောက်ထပ်မွေးဖွားလာမယ့်ရင်သွေးလေးအတွက် ကောင်းချီးတွေပေးနေကြပါတော့တယ်။
Next ခေတ်မီပြီးစတိုင်ကျတဲ့ အလန်းစား airport fashion ​တွေနဲ့ ပရိသတ်​တွေကို ​ခြွေချခဲ့ပြန်တဲ့ Jisoo နဲ့ Rosé »
Previous « 'Goblin' ဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးရင်း သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို စွန့်လွှတ်ဖို့ စဉ်းစားမိခဲ့တဲ့ Kim GoEun